अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन : दुई वर्षमा तीन अर्ब बचत - Kantipath.com
दुई वर्षको अवधिमा पाइपलाइनबाट एक अर्ब ६१ करोड लिटर डिजेल आयात गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ४८ करोड ८५ लाख लिटर, आव २०७७-७८ मा एक अर्ब ३१ तथा चालू आवको हालसम्ममा १२ करोड ४४ लाख डिजेल आयात भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निगमले सोही पाइपलाइनबाट दैनिक एक लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल आयात गर्दै आएको छ ।
पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न थालेपछि ढुवानीबापत रु तीन अर्ब २३ करोड २२ लाख १६ हजार बचत भएको पौडेलले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा र प्राविधिक नोक्सानी कम हुँदा निगमले सो बराबरको बचत गर्न सकेको उनले बताए । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्तामा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुँदैन भन्ने अनुभूति भएको, ढुवानीकर्ताले खेप्नुपर्ने सास्ती हटेको र परियोजना समयमा सम्पन्न गरेर जी–टू–जी मोडलको सफल परियोजनाको रुपमा एउटा उदाहरण बन्न सफल भएको छ । अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले निगमको प्राविधिक रुपान्तरणको प्रतिनिधित्व गरेको पौडेलको भनाइ छ ।
निगमको प्रदेश नम्बर २ प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रदीपकुमार यादव अबको डेढ वर्षमा एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आउन सुरु हुने बताए । परियोजना सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ लिन भारततर्फ पुग्न नपर्ने उहाँको विश्वास छ । यसबाट निगमले मासिक थप रु ११ करोड बचत गर्नसक्ने उहाँले जानकारी दिए ।
“ओहो ! तीज आउनुभन्दा महिना दिन अघिदेखि माइत जाने हुटहुटी हुन्थ्यो । माइतीबाट लिन को आउनुहोला भनेर मनमा बेग्लै उत्साह हुन्थ्यो । घरको काम पनि कति छिटो–छिटो गरिन्थ्यो त्यतिबेला”, पोखरा महानगरपालिका–६ की ७३ वर्षीया जसोदा पराजुली आफ्नो समयको तीजलाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो । पराजुली ११ वर्षको उमेरमा ४५ वर्षका पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिनुभयो । तर उहाँको उमेर २५ वर्ष हुँदै श्रीमान्को निधन भयो । उतिबेला उमेरभन्दा पनि सम्पत्ति र इज्जत हेरेर विवाह गर्ने चलन भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँको माइती स्याङ्जा सेतीखोला । सात दिदीबहिनी, दुई दाजुभाइमध्ये साइली छोरी पराजुली तीज सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “धेरै दिदीबहिनी थियौँ, दाजुभाइ विदेश थिए, बाबाले लिन आउन सबैलाई भ्याउनु हुँदैनथ्यो अनि मान्छे खोजेर कृष्णाष्टमीदेखि पालैपालै सबै दिदीबहिनीलाई लिन पठाउनुहुन्थ्यो । फेरि उबेला तीजमा लिन नआइ माइत जाने चलन पनि थिएन ।”
पराजुली भन्नुहुन्छ, “माइत पुगेर कहिले मनमा भएको पीर पोखम्ला । आमाले पकाएको दर खाम्ला भनेर मन त्यसै रमाउँथ्यो ।” तीजमा खाने दरबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, “तामा गाभा, घिरौँला, चिचिन्डा काँक्राको अचार हुन्थ्यो । औँसीपछि जुठो हुन्छ भनेर मासु खाइँदैनथ्यो । अनदी र झिनुवाको चामल छड्को चलेपछि छोप्ने बेला भएमा मगमग बसाउँथ्यो । आरीमा चामल भिजाएर, कसौडीमा घिउ राखेर चामल ओइरिएर फरक्क–फरक्क भुटेर छोप्दै पकाउँदै गरी तयार पारेको भातको स्वाद आजभोलि कहाँ पाउनु ?”, उहाँ सम्झनुहुन्छ । त्यसरी पकाएको खानेकुरालाई पिँढीमा सबै जम्मा भएर आमाले पकाएको खाजा बरिलै भन्दै खाँदै नाच्दै गरेको स्मरण गर्नुभयो । “रातिको १२ बजेसम्म पनि दर भनेर खिर खाइन्थ्यो र भोलिपल्ट हरितालिका पूजा गर्ने भएकाले पूरा निराहार बसिन्थ्यो ।”
व्रतको भोलिपल्ट बिहान पार्वतीको पूजा गरेर हलोले जोतेको खाने भनेर एक छाक चोखो खान खाने चलन थियो । खोला पँधेरामा बिहानै पञ्चमी स्नान गरेर पूजा गर्दाका बिर्सन नसक्ने क्षण पनि उहाँसँग छन् । “वर्ष दिनको घरको दुःख पीडा माइती पुगेर साथीसङ्गीसँग बसेर पोख्दाको आनन्द बेग्लै हुन्थ्यो । कसका कति छोराछोरी भए, घरकाले कति माया गर्छन्, श्रीमान् कस्ता छन् भन्ने कुरा साथीसँग साट्थ्यौँ, कसैले सुखका कुरा गर्थे, कसैले घरमा पाएको दुःख सम्झँदै भक्कानिन्थे”, उहाँ सम्झनुहुन्छ, “छोरीको कर्म यस्तै हो भन्दै मन बुझाउँदै नाचगान गथ्र्याँै, दुःख भुल्थ्याँै ।” उहाँले अहिलेजस्तो आमा औँसी, बा औँसी भन्ने त्यस समयमा चलन पनि नभएको र तीज मात्र माइत जाने एउटा अवसर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस समयमा खोलामा पुल नहुँदा, यातायातको सुविधा नहुँदा, खोला तरेर आउनुपर्दा र लगातार पर्ने झरीले मन अमिलो बनाउने गरेका अनुभव पनि छन् । पञ्चमीको भोलिपल्ट माइतबाट घर आउँदा कोसेली लिएर आउनुपथ्र्यो, कुराउनी र रोटी बोकेर सबैलाई दिँदै ढोग्नुपर्ने चलन रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । विवाहपछि लेकसाइडवासी बन्नुभएकी पराजुली उतिबेला माइत जाँदा गाएको गीत यसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ः
उहाँले त्यस समय पुरुषले बहुविवाह गरेर सौता सौता नबोल्दा पनि गीतबाट बोलचालको प्रयास गरिने सन्दर्भको गीत पनि यसरी सुनाउनुभयो ः
दुई दाजुभाइ तीन दिदीबहिनीमा कान्छी भुजेल तीजमा सबै जना आएर नाच्ने रमाइलो गर्न आँगनभरि दुःख बेदनाको गीत गाउँदै रमाइलो गर्दाका पलहरु निकै रमाइलो लाग्ने गरेको सुनाउनुहुन्छ ।
“आमाले घरमा दुःख गरेका छोरीहरू, चिसो लागेको हुन्छ भन्दै, पाखुराबाट घिउ चुहिने गरी खाजा पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो । खाजा खान्थ्यौँ गाउँतिर डुल्न जान्थ्याँै, साथीसङ्गी जम्मा हुन्थ्यौँ, नाच्थ्याँै, दुःखसुखका कुरा साटासाट गथ्र्यौँ ।”
“खिर, तामा, काँक्राको अचार, घिरौलाको तरकारी, चाम्रे भात साह्रै स्वादिलो हुन्थ्यो,” बाबाले पकाएर दिएको घिरौलाको तरकारी कहिल्यै बिर्सन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको यस पर्व हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी व्रत बसेपछि उनको व्रत पूर्ण भएर महादेव श्रीमान् पाएको दिनलाई हिन्दु महिलाहरुले हरितालिका तीजको रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । भाद्र शुक्ला तृतीयाका दिन भगवान शिवको आराधाना गरेर नाचगान गरेर यो पर्व मनाउने परम्परा रही आएको छ ।
Previous Previous post: ‘सफा–सुन्दर’ नारामै सीमित
Next Next post: बाँके साक्षर घोषणा हुन बाँकी
प्रदेश नं ३ सरकारले आधुनिक कृषि सामग्री उद्योग स्थापना गर्ने
यार्सागुम्बाको मूल्य निर्धारण नहुँदा थन्कियो, अन्योलमा स्थानीय !
राजधानी बेइजिङलगायत मुख्य शहरमा उडान भर्दै हिमालय एयरलाइन्स !
तिहार आउनै लाग्दा मादल खरीद बिक्री शुरु, व्यापार भने घट्दो
सनराइज बैंककाे शाखारहित बैंकिङ सेवा झापामा
सुनको मुल्यले तोड्यो रेकर्ड !